खानपान – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खानपान
Tag Archives: खानपान
औषधीय गुण भएको अदुवा खानुका यस्ता छन् अनेक फाइदा
काठमाडौं । जाडो मौसममा धेरै रुचाइने अधुवा नेपाली भान्सामा चियामा राखेर खानुका साथै तरकारीमा राखेर पनि खाईन्छ । साथै, अदुवा हालेर जाडोमा सुप खाँदा पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । भिटामिन सी, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरन, जिन्क, कपर रक्रोमियमजस्ता पोषक तत्वले भरिपुर्ण अदुवा हुन्छ । यस्ता छन् अदुवा खानुका अनेक फाइदा किटाणुसँग लड्छ अदुवामा किटाणु तथा भाइरससँग…
राम्रो स्वास्थ्यको लागि बोक्रा सहित खानुस् यी तरकारी
काठमाडौं । तरकारी, हाम्रो खानाको एक आवश्यक भाग हो, जसले हाम्रो शरीरमा पोषक तत्वको कमीलाई पूरा गर्छ । तरकारीमा धेरै तेल, मसला राखेर पकाउदा यसको स्वाद त बढ्छ तर, पोषक तत्व बढाउनको लागि पकाउनुभन्दा पहिले नै धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामीमध्ये धेरैको बानी तरकारीको बोक्रा फालेर मात्रै काट्ने हुन्छ । तर, तरकारीको बोक्रामा पनि…
साउन १५ मा कसरी चल्यो खीर खाने चलन, कसरी बनाउने स्वादिष्ट खीर ?
काठमाडौं, १५ साउन । साउनको १५ गते अर्थात खीर खाने दिन । हाम्रो नेपाली परम्परामा ऋतुअनुसार आउने पर्व र त्यही पर्वअनुसार खाने खानाहरु छन्। असार १५ मा हामी दहि च्यिूरा खान्छौ भने साउन १५ गते खीर । माघे सक्रातिमा तरुल, चाकु खान्छौ भने जनै पूर्णिमामा क्वाटी खाने गर्दछौ । हामीले मान्दै आएका यस्ता पर्वहरु छन्…
पिस्ता खानुका फाइदै-फाइदा, चम्किलो छालादेखि मुटु सुरक्षासम्म
क्लाउड पत्रिकासाउन १३, २०७८
काठमाडौं । मिठो सुशोभित ड्राई फ्रूट पिस्ता, धेरै व्यक्तिहरुको मनपर्ने खानेकुरामा पर्न सक्छ । यो स्वाद निकै मिठो र उत्कृष्ट हुन्छ । यसको फाइदाहरू थाहा पाइसकेपछि मानिसहरुलाई यो अझ मन पर्न सक्छ। यस्ता छन् पिस्ता खानुको फाइदा १. उज्यालो हरियो रंगको पिस्तामा फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन-सी, जिंक, तामा, पोटाशियम, फलाम, क्याल्सियम र अन्य धेरै पोषकतत्वहरूमा भरपूर…
चकलेट खानुका अनेक फाइदाः डिप्रेशन कम गर्नेदेखि सुन्दर बनाउनेसम्म
क्लाउड पत्रिकासाउन १०, २०७८
काठमाडौं । चकलेट मन नपराउने मानिस सायदै होलान् । बच्चा देखि बुढाबुढीसम्म चकलेट भनेपछि सबैजना हुरुक्कै हुन्छन् । चकलेट तपाईंलाई किनमन पर्छ ? यदि कसैले तपाईसँग यो प्रश्न सोध्छन् भने तपाईंले पक्कै भन्नुहुनेछ यसको मिठो स्वादको कारणले। तर, अब तपाईंले स्वादबाहेक यसको स्वास्थ र सोन्दर्यसँग जोडिएको लाभ पनि बताउन सक्नुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन् झन्झट नमानिकन…
यस्ता छन् आँप खानुका अनेक फाइदा
क्लाउड पत्रिकासाउन ८, २०७८
काठमाडौं । गर्मी मौसमको सुरुवात भईसकेको छ । यो मौसममा स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । साथै गर्मीको सिजनमा बढी मात्रामा फलफूलको सेवन गर्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । गर्मी मौसममा पाइने फलफूल मध्ये आँप पनि एक हो । आँपमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, भिटामिन सी का साथै कपर, जिंक, पोटाशियम, मिनरल्स…
क्लाउड पत्रिकासाउन ५, २०७८
काठमाडौं । यी ९ खानेकुराको प्रयोगले बढाउँछ शारीरिक सुन्दरता सुन्दर व्यक्तित्व भएका व्यक्तिको प्रभाव हरेक भेट वा परिस्थितिमा सकारात्मक हुन्छ । सुन्दर व्यक्तित्वका लागी मानिसको शारीरिक वनावटसँगै उसको शारीरीक सुन्दरता पनि आवश्यक हुन्छ । शारीरिक सुन्दरता भनेको मानिसको अनुहार, आखाँ, छालाको सुन्दरता नै हो । आफूलाई सुन्दर पार्न मानिस सौन्दर्य सामाग्रीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पनि…
कहिलेकाँही ब्रत बस्दा मधुमेहको जोखिम कम
काठमाडौं । साउन महिना सुरु भएसंगै नेपाली हिन्दु महिलाहरु हरेक सोमबार ब्रत बस्ने गर्छन् । यसरी लामो समयसम्म केही नखाई ब्रत बस्दा स्वास्थ्यमा असर त पर्दैन भन्ने धेरै मानिसको जिज्ञासा हुनसक्छ । तर, कहिलेकाँही ब्रत बस्ने मानिसमा मधुमेहको जोखिम कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । लगातार १० देखि १२ घण्टा केही नखाइ ब्रत बस्नाले…
क्लाउड पत्रिकासाउन ४, २०७८
काठमाडौं । सबैलाई थाहा छ खराब बानीले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । केही बानीहरू शरीरको लागि पनि धेरै खतरनाक हुन्छन्, जसले बिस्तारै हामीलाई मृत्युसम्म पुर्‍याउँछ । विज्ञहरू भन्छन् यदि यस्ता बानीमा सुधार गर्ने हो भने मृत्युको जोखिम निश्चित रूपले कम गर्न सकिन्छ । यी हुन् सुधार गर्नुपर्ने बानी : १. डाक्टरहरू भन्छन कि सूर्यको…
बच्चाको स्मरण शक्ति बढाउन खुवाउनुहोस् यी ५ खानेकुरा
क्लाउड पत्रिकाअसार २८, २०७८
काठमाडौं । हाम्रो शरीरको सबै अङ्गहरुलाई मस्तिष्कले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । मस्तिष्कले नै सबै अङ्गहरुलाई के के गर्ने भनेर सन्देश पठाउँछ जसले गर्दा अङ्गहरुले राम्रो सँग काम गर्न सक्छ । त्यसैले मानिसको मस्तिष्कले राम्रोसँग काम गरेन भने शरीरका अन्य अङ्गहरुले पनि राम्रो सँग काम गर्न सक्दैनन् । बच्चालाई अध्ययनमा सफल बनाउन र उनीहरूको स्मरण शक्ति…